Nayi ividiyo ethandekayo kaDadju nengane yakhe benza i-buzz kwiwebhu - Thumela RELAY
Umfowabo kaGims ushaye i-web kanzima ngokushicilela uLwesine, Julayi 30, i-video enhle lapho acula nengane yakhe encane yezinyanga ezine.
UDadju ubelokhu ehamba emafwini emasontweni amuva… noma mhlawumbe phezu kwamanzi! Ngenkathi isihloko sayo esithi Grand bain, sakhiqizwa njengengqondo phakathi kukaNinho, sewephule amarekhodi selokhu kwethulwa ngoJuni 19 kuwo wonke amapulatifomu okusakaza, kukhishwe isiqephu sabo obekulindelwe kakhulu kulo uLwesine, Julayi 30.
Umphumela awudumazi futhi uveze ukukhiqizwa kwesabelomali esikhulu esivele kubalwa cishe ama-400 wokubukwa emahoreni ambalwa. Sibona uFataju egcobhoza emanzini ajulile enkampanini ka ... ushaka! Ngoba kukhona "Baningi abantu abanomona, oshaka abaningi kakhulu ekupheleni", ngokwezwi lengoma.
Kepha ekupheleni kukaJulayi, kumane kungukuqala konyaka omusha wesikole umculi abezobe elungiselela i-albhamu entsha nokusebenzisana komcimbi nomculi waseMelika uChris Brown. NgoJuni 2021, lo mculi uhlelelwe uhambo lokubandakanya izinsuku ezingekho ngaphansi kwezinsuku ezimbili eParc des Princes eParis.
Umzuzu omncane wokuthula
Naphezu kwalesi simiso esimatasa, uBabaju usasenza isikhathi sokunakekela umndeni wakhe osemusha. Ngaphezu kwalokho, uyayikhipha ngokuziqhenya kumazwi wengoma:
"Baby, ngakwesobunxele sami ngiphethe idayimane elikufanele." Bheka kahle isithunzi esizoshintsha impilo yakho. Ngoba impilo yakho izoba ngcono nami. Awunakho ukungabaza, ngitshele ukuthi mangaki ama-zeros adingekayo ukukuhlomisa futhi ngizokunika wona ”.
Umlingani wakhe wabeletha ingane yabo yesibili, umfana omncane, ngo-Ephreli 3, 2020. Ubaba wayevele engubaba ojabulayo kaMaamou, inzalo yenkanyezi ezalwe ngo-2017. Ku-Instagram ngoLwesine, kuJulayi 30, uBabaju ushicilele izithombe zakhe izihlobo ngenkathi zisendizeni eyababuyisela eParis, njengoba abonisa endabeni.
Kepha ingaphezu kwakho konke ividiyo yakhe, indodana yakhe emadolweni, icula izingoma zikaMaria Maria nguCarlos Santana, ngokungangabazeki othola intambo yesimonyo.
Umfowabo omncane ka-Master Gims uzenzele indawo ezinhliziyweni zabasebenzisi be-Intanethi abakhombise amakhulukhulu namakhulu wabo ochungechungeni lwezimvo zakhe ngemuva nje kokuthi ividiyo ishicilelwe. "Muhle [muhle]", wafingqa omunye wabo kahle. UDadu umane wanqoba abalandeli bakhe.
Le ndatshana yavela okokuqala ku-: https://afriqueshowbiz.com/une-video-de-dadju-avec-son-bebe-fait-le-buzz-sur-la-toile/
Nakhu okucelwa ngumyeni kaNicki Minaj, Ukulinda Isilingo